မတ် ၂၇၊ ၂၀၀၉
မင်းမြင်ခွင့် ရစေချင်တယ်။ (၃)
အလွမ်းတွေ ရွာနေပေါ့။ (၃)
တမြေ့မြေ့ ငါတို့လွမ်းကြ။ (၄)
အချစ်ချည်းသက်သက် ။ (၅)
၃၁၊ ၇ ၊၂ဝဝ၆
…… သူငယ်ချင်း ရဲဘော်ကြီးဂုရု (သို့မဟုတ်) ပွင့်သစ် (ကရိန်ကန်) ….. သို့ …. အမှတ်တရ
ကျွန်တော့်အနေနဲ့ ဒီ ကဗျာလေးကို ထင်မှတ်မထားပဲနဲ့ မိုးမခရဲ့ Wordpress အီးမေးလ် စာမျက်နှာမှာ ပြန်လည် တွေ့ရှိလိုက်ရတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာ အဲဒီကာလကို ရင်ခုန်မှုတွေနဲ့ ပြန်သတိရလိုက်တယ်။ လူ (၅)ယောက်နဲ့ ကဗျာတပုဒ်၊ ဇူလိုင်မိုးစက်များ၊ လွန်ခဲ့သော (၆)နှစ်ကာလ၊ ကိုခင်ဝမ်း အမှတ်တရ၊ သူစိမ်းဆန်နေတဲ့ ဒုတိယအိမ် ….. ။
ကိုမင်းကိုနိုင်တို့ အကျဉ်းထောင်ကနေ ပြန်လွတ်လာတယ်။ လွတ်မြောက်ရေးအတွက် တိုက်ပွဲဝင်ကျဆုံးခဲ့တဲ့ ဂုရုရေ ….. မင်းကို သိပ်သတိရနေမိတယ် ….
Posted by ကိုဈာန် at 8:23 PM